Ukhuseleko kwi-Omni-Channel yeHlabathi
NgoLwesihlanu, Meyi 2, 2014 NgoLwesihlanu, Meyi 16, 2014 UKelsey Cox
UGoogle uzimisele ukuba kusuku olunye, iipesenti ezingama-90 zabasebenzisi basebenzise izikrini ezininzi ukuhlangabezana neemfuno zabo ezikwi-Intanethi ezinje ngeebhanki, ukuthenga, kunye nokubhukisha uhambo kwaye balindele ukuba idatha yabo ihlale ikhuselekile njengoko betsiba eqongeni ukuya eqongeni. Ngolwaneliseko lwabathengi njengeyona nto iphambili, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwedatha kunokuwela kwiintanda. NgokukaForrester, iipesenti ezingama-25 zeenkampani ziye zafumana ulwaphulo olukhulu kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. E-US kuphela ngo-2013, ixabiso eliphakathi lokophula idatha laliyi- $ 5.4 yezigidi.
Kwi-infographic engezantsi, Isazisi sePing isibonisa indlela ezitshintshe ngayo izinto abathengi kunye nokulindelweyo, ifuthe kubuchwephesha beshishini, kunye nendima ebalulekileyo edlalwa kukhuseleko xa kusiziwa ekunikezeleni awona mava abathengi. Landela iingcebiso zabo ukuqinisekisa ukuba idatha yabathengi bakho inokuhlala ikhuselekile kwaye ikhuselekile.
tags: e-commerceIvenkile ye-eeCommercekwi-infographicumjelo-omniomnichannelping ungubaniIvenkileukhuseleko